Tirakoobka Admob | Androidsis
Waxaan hore u haysannay tirakoobyada ay Admob ku siiso taraafikada marinnada kala duwan, nidaamyada hawlgalka iyo waddammada. Boggan oo maalmo uun ka hor ahaa warkiisii iibsaday Google Waa shirkadda maamusha xayeysiiska ugu badan ee boosteejooyinka mobilada, sidaa darteed tirakoobyadeeda ayaa aad loogu kalsoon yahay.
Waxaan u qaybin doonnaa isbarbardhigga saddex qaybood, adduunka oo dhan, USA iyo UK.
Garaafyada ku yaal dhinaca bidix waxay leeyihiin xogta bisha Agoosto iyo midigta kuwa bisha Sebtember. Dusha waxaa ku yaal xogta ay burburiyeen sumadaha terminal iyo xagga hoose nidaamyada hawlgalka. Si aad u aragto garaafka ballaaran waxaad riixi kartaa.
Marka hore waxaan la soconnaa tirakoobka adduunka marka la barbardhigo bisha Sebtember iyo bishii hore ee Agoosto. Dhexdeeda waxaan ku aragnaa sida Android wuxuu sii wadaa inuu helo dhul, isagoo ka socda 7% ilaa 10%, sidaasna wuxuu kaga horreeyaa RIM oo wuxuu isku meeleeyaa kaalinta saddexaad. Iphone -ka iyo nidaamkiisa ayaa sidoo kale koray 3% Symbian -na wuxuu ku dhacay 6% waana kuwa ugu badan ee uu saameeyay.
Haddii aan aragno xogta kaliya ee ka timid Mareykanka, oo ah meesha sida caadiga ah marka hore laga bilaabo terminaalka, waxaan fiirineynaa sida iPhone -ku hoos ugu dhacay 2% iyo Android kordhay 3%. Wax yar baa masaafooyinka la soo gaabiyey.
Ugu dambayntii tirakoobka Uk waxaan fikrad ka heli karnaa qaybta Yurub. Dhexdeeda waxaan ku aragnaa sida nidaamka hawlgalka iPhone u sii wado inuu kootada ka qaato Symbian iyo sida Android waxay ku kordhaysaa 1% waxayna u jirtaa hal talaabo oo kaliya inaad dhigto booska labaad.
Tani waxay si cad u sii caddaynaysaa in labada nidaam hawlgal ee waaweyn ee xukumi doona muddo dheer ay yihiin iPhone iyo Android.
Nagala soco Twitterka @androidsis oo waxaad la socon doontaa taariikhdaada Android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Tirakoobka ADMOB Sibtember